MAGL inhibitor kunye ne-FAAH Inhibitor: i-JW-642 & OL-135 & PF-750 i-AASraw
/Blog/Ithala/MAGL inhibitor kunye ne-FAAH Inhibitor: JW-642 & OL-135 & PF-750
ezaposwa ngomhla 08 / 15 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Ithala.
Umsebenzi we-2.Biological-CAS: 1416133-89-5
Umsebenzi we-4.Biological-CAS: 681135-77-3
5. Uvavanyo lwe-PF-750
Umsebenzi we-6.Biological-CAS: 959151-50-9
7. Ukuhlaziywa kwe-JZL-184
Umsebenzi we-8.Biological-CAS: 1101854-58-3
10.Guide ukuthenga i-JW-642 MAGL inhibitor inyathelo ngesinyathelo
JW-642 (1416133-89-5) i-monoacylglycerol lipase (MAGL) ye-inhibitor ene-IC50 ye-7.6, i-14 kunye ne-3.7 nM ye-mouse, i-rat kunye ne-MAGL yabantu ngokulandelanayo. I-Endocannabinoids efana ne-2-arachidonoyl glycerol (i-2-AG) kunye ne-arachidonoyl ethanolamide ziyi-lipids ezisebenzayo ezibandakanyekayo kwiinkqubo ezili-synaptic ezibandakanya ukuphunyezwa kwee-receptors ze-cannabinoid. I-Monoacylglycerol lipase (MAGL) yi-serine hydrolase ejongene ne-hydrolysis ye-2-AG i-arachidonic acid kunye ne-glycerol, ngaloo ndlela iphelisa umsebenzi wayo. I-JW-642 inhibitor enamandla ye-monoacylglycerol lipase (MAGL) ebonisa ii-IC50 iimpawu ze-7.6, i-14, kunye ne-3.7 nM yokuvinjelwa kwe-MAGL kwi-mouse, i-rat, kunye ne-brain membranes, ngokulandelanayo .1 JW-642 ikhetha i-MAGL, ukufuna iindawo eziphezulu kakhulu ukwenzela ukuvimbela ngokusemthethweni umsebenzi we-acid amide hydrolase (IC50s = 31, 14, kunye ne-20.6 μM nge mouse, i-rat, kunye ne-brain membranes) ngokulandelanayo).
Umzimba I-DMSO> I-10 mM Isitoreji seSitoreji kwi -20 ° C
I-JW-642 inhibitor enamandla ye-monoacylglycerol lipase (MAGL) ebonisa ixabiso le-IC50 ye-7.6, i-14, kunye ne-3.7 nM yokuvimbela i-MAGL kwi-mouse, i-rat, kunye ne-membrane yengqondo, ngokulandelanayo. IC50: 7.6 / 14 / 3.7 nM (imouse / i-rat / i-MAGL yabantu)
PF-750 inamandla, ixhomekeka ngexesha, i-FAAH inhibitor engenakuphikiswa kunye ne-IC50 neempawu ze-0.6 kunye ne-0.016 μM xa i-FAAH ibuye ixhaswe nge-5 kunye ne-60 imizuzu ngokulandelanayo. I-fatty acid amide hydrolase (FAAH) yi-enzyme ejongene ne-hydrolysis kunye nokungasebenzi kwe-acid acid amides kuquka i-anandamide ne-oleamide. Isalathisi esekelwe kwimisebenzi yeesampuli ze-proteome ezihlukeneyo zomntu kunye nezidumbu zibonisa ukuba i-PF-750 ikhetha i-FAAH ngokumalunga namanye ama-serine hydrolases, engabonakali nento engaqondakaliyo ngaphandle kwe-500 μM. PF-750 ibonisa i-10 ngeyona ndlela engcono kune-URB597 (Sigma # U4133) emva kwe-30 min yangaphambili. PF-750 ikhethe kakhulu kwi-FAAH. Kwanokuphakama nje nge-500 μM, kwakungekho nxu lumano kunye ne-enzymes ezininzi ezivivinywe, kodwa i-URB597 kunye namanye ama-FAAH inhibitors awayaziwayo ayenzi kakuhle kwi-concentrating ephantsi (100 μM).
I-JZL-184 (1101854-58-3) i-inhibitor enamandla kwaye ekhethiweyo ye-MAGL kunye ne-IC50 ye-8 nM kunye ne-4 μM ukwenzela ukuvinjelwa kwe-MAGL ne-FAAH kwimimbrane yobuchopho. Ixabiso le-IC50: I-8 nM I-Target: i-MAGL inhibitor kwi-vitro: I-JZL-184 ilandisa i-DSE kwi-Purkinje neurons kwiimpawu ze-cerebellar kunye ne-DSI kwi-CA1 i-pyramidal neurons kwimigqomo ye-hippocampal. I-JZL-184 inamandla kakhulu ekuvimbeleni i-mouse MAGL kune-rat MAGL. kwi-vivo: Xa ilawulwa kwiigundane kwi-16 mg / kg, i-intraperitoneally, i-JZL-184 iyanciphisa umsebenzi we-MAGL ngu-85%, iphakamisa amaqondo e-2-AG ngengqondo nge-8, kwaye yenza umsebenzi ohlotshaniswayo kwiimvavanyo zeentlungu ezinokulinganisa ophakathi kwe-cannabinoid (CB1). Ukulawulwa kakuhle kwe-JZL-184 ku-FAAH (- / -) iigundlo eziphucukisiwe ubukhulu be-subset yeempendulo ze-cannabimmetic, unyango oluphindaphindiweyo lwe-JZL-184 lukhokelela ekunyamezelaneni nemiphumo ye-antinociceptive, ukunyamezelana kwemiphumo ye-pharmacological ye-Δ-tetrahydrocannabinol, kunciphisa kwi-CB1 i-receptor receptor-ivuselele i-guanosine i-5'-O- (3 - [(35) S] thio) i-triphosphate ebophayo, kunye nokuxhomekeka njengoko kuboniswa ziziphathamandla zokurhoxiswa kwe-irmonabant-precipitated, kungakhathaliseki i-genotype.
9. I-inhibitors ephezulu ye-monoacylglycerol lipase ethwele iqela elisebenzayo
Izinto ze-8 ezibalulekileyo zePowderolone Powder	I-8 Ininzi Ubukhulu Bamachiza Wezobisi Zobunzima Kwili hlabathi